Mitemo yekushandisa - Carros.com
Saina semutengesi Bhalisa semutengesi
AfuganisitaniAland IslandsArubhaniyaArujeriyaAmerican SamoaAndoraAngoraAngwiraAntarcticaAndiguya neBhabhudhaAjendinaArumeniyaArubhaOsitireriyaOsitiriyaAzabhaijaniBahamas TheBhahareniBhangiradheshiBhabhadhosiBherarusiBherujiyamuBherujiyamuBheriziBheniniBhemudhaBhutaniBorivhiyaBhoziniya neHezegovhinaBotswanaBouvet IslandBhuraziriBritish Indian Ocean TerritoryBhuruneyiBharugeriyaBhakina FasoBhurundiKambodhiyaKameruniKanadhaKanadhaKepu VhedhiZvitsuwa KeyimeniYepakati Ripabhuriki AfrikaChadhiChireChinaKrisimasi IslandCocos (Keeling) IslandsKorombiyaKomorosiKongoZimbabwe TheZvitsuwa KukuKosita RikaCote d'Ivoire (Ivory Coast)Croatia (Hrvatska)KiyubaSaipurasiCzech RepublicDhenimakiJibhutiDhominikaRipabhuriki DhominikaMabvazuva TimoEkwadhoIjipitaE SavhadhoIkwetoriya GiniEritiriyaEsitoniyaIthiyopiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFiji IslandsFinirendiFinirendiFuranziFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabhoniGambia TheJojiyaJerimaniGhanaGibhurataGirisiGirinirendiGirenadhaGuadeloupeGuwamuGwatemaraGuernsey naAlderneyGiniGini BhisauGuyanaHaitiYakanzwa uye McDonald IslandsHondurasiHong Kong SARHangariAisirendiIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndonezhiyaIranIrakiAyarendiIzirayeriItariJamaikaJapaniJerseyJodhaniKhazakisitaniKenyaKiribatiKorea NorthKorea SouthKuwetiKijisitaniRayosiRativhiyaRebhanoniResotoRaibheriyaRibhiyaLiechtensteinRituaniyaRukuzemubhoguRukuzemubhoguMacau SARMasedhoniyaMadhagasikaMarawiMarazhiyaMarudhivhuMariMarutaMan (Isle of)Zvitsuwa MasharoMartiniqueMauritaniyaMorishiyasiMayotteMekisikoMaikironezhiyaMorodhovhaMonakoMongoriyaMondenegiroMotseratiMorokoMozambikiMayanimaNamibhiyaNauruNeparoNetherlands AntillesNetherlands TheNew CaledoniaNyuzirendiNikaraguwaNaijaNaijeriyaNyuMaodzanyemba Zvitsuwa MariyanaNoweyiNoweyiOmaniPakisitaniParauPalestinian Territory AkachengetwaPanamaPapa Nyu GiniParagwayiPeruFiripainiPitcairn IslandPorendiPutugaroPota RikoKwataReunionRomaniyaRashiyaRashiyaRwandaSendi HerenaSendi Kitsi ne NevhisiSendi RusiyaSaint Pierre naMiquelonSendi Vincent neGirenadhiniSaint-BarthelemySaint-Martin (French chikamu)SamoyaSani MarinoSayo Tomu nePurinzipuSaudhi ArabhiyaSenegaroSebhiyaSecheresSiyera RiyoniSingapowoSirovhakiyaSirovhinyiyaZvitsuwa SoromoniSomariaChamhembe AfrikaChamhembe AfrikaSouth GeorgiaSouth SudanSpeiniSpeiniSpeiniSpeiniShiri RangaSudhaniSurinameSvalbard Uye Jan Mayen IslandsSikwazirendiSiwidheniSiwizarendiSiwizarendiSiwizarendiSiriyaSiriyaTaiwanTajikisitaniTanzaniaTairendiKuendaTokerauTongaTrinidhadhi neTobhagoTunisiyaTekiTekimenisitaniTurks uye Caicos IslandsTuvharuUgandaUkireniMubatanidzwa wenyika dzeArab Emiratesnyika dzakabatananyika dzakabatanaUnited States Minor Outlying IslandsUrugwayiUzebhekisitaniVanhwatuVatican City State (Holy See)VhenezweraVhetinamuVirgin Islands (British)Virgin Islands (US)Wallis And Futuna IslandsWestern SaharaYemeniZambiaZimbabwe
Aya mazwi ekushandura akafananidza shanduro, mazwi edu ebasa anoshandiswa mune shanduro yeChirungu chesaiti. Ona shanduro yechiChirungu
1. Mitemo yekushandisa
Nokusvika kune webhusaiti pa https://carros.com, unobvumirana kusungwa nemitemo yebasa, mitemo yose inoshanda uye mitemo, uye kubvumirana kuti iwe unotarisana nekuteerera nemitemo yemunharaunda inoshanda. Kana iwe usingabvumirani nemamwe emashoko aya, iwe unorambidzwa kushandisa kana kuwana peji iyi. Zvinhu zvakagadzirwa pawebsite ino zvakachengetedzwa nemitemo inoshandiswa yekodzero uye yekutengeserana.
2. Shandisa Ikopi
Chibvumirano chinobvumirwa kukodhinda kanguva yemabhuku (mashoko kana software) pawebsite yeCarros.com yega yega, kwete yekutengesa nguva yekuona chete. Iyi ndiyo kubvumirwa kweisensi, kwete kutumirwa kwezita, uye pasi peyi reisiti haugoni:
shandura kana kukopa zvinhu;
shandisa zvinhu zvechinangwa chipi nechipi chekutengeserana, kana chero chekuonekwa kwevanhu vose (kutengeserana kana kusina zvekutengesa);
edza kubvisa kana kuchinja unyanzvi chero ipi zvayo inowanikwa pawebsite yeCarros.com;
kubvisa chero kodzero kana imwe nyanzvi yezvinyorwa kubva kune zvinhu; o
tumira zvinhu kune mumwe munhu kana kuratidza zvinhu pane imwe yese server.
Ivhareji ichagumisa pakarepo kana ichiputsa chero ipi zvayo mitemo uye inogona kubviswa naCarros.com chero nguva. Pakupera kwekuona kwako kwezvinhu izvi kana pakupedzwa kwechirongwa ichi, unofanira kuparadza chero zvinyorwa zvitsva zvaunenge uine, kana mune zvemagetsi kana zvakadhindwa.
Zvinhu zvepaCarros.com webhusaiti zvinopiwa "sezvazviri". Carros.com haisi mavimbiso, anotaura kana kuti anoreva, uye iye zvino anoramba uye anoramba mamwe mavimbiso ose, kusanganisira, asina kukwana, zvivimbiso zvinoreva kana mamiriro ekutengeserana, kufanana kwechinangwa chairo kana kusina kukanganisa kweimba yacho. unyanzvi kana kumwe kukanganisa kodzero. Mukuwedzera, Carros.com haibvumirwi kana kuita chero mumiririro maererano nekururama, zvichida mhinduro kana kuvimbika kwekushandiswa kwezvinhu zviri pa webhusaiti yayo kana kuti zvine chokuita nezvinhu zvakadaro kana pane chero nzvimbo inosanganiswa nesero ino.
Pasinei nemamiriro ezvinhu Carros.com kana vatengesi varo vachava nemhosva yekukuvadza (kusanganisira, pakati pevamwe, kukanganisa kwekurasikirwa kwedata kana purofiti, kana nekuda kwekugadzikana kwebhizimisi) inobva mukushandiswa kana kusakwanisa kushandisa zvigadzirwa mumotokari. .com webhusaiti, kunyange kana Carros.com kana mumiririri ane kodzero yeCarros.com ave akaudzwa nemashoko kana kunyora nezvekugona kwekukuvara kwakadaro. Nokuti dzimwe hurumende haibvumiri kukanganisa pane zvinoreva zvikwereti kana kukanganisa kwemhosva yezvikanganiso zvisingaoneki kana kuti zvinokanganisa, izvi zvisingagoni kushanda kwauri.
5. Kururama kwezvinhu
Zvinhu zvinowanika pawebsite yeCarros.com zvinogona kusanganisira teknolojia, typographical kana kuti mapikicha mapiko. Carros.com haisi chivimbiso chekuti chero chezvinhu zvepawebsite yako zvakarurama, zvakakwana kana zvezvino. Carros.com inogona kuita shanduko kune zvinyorwa zviri pa webhusaiti yayo panguva ipi zvayo pasina chiziviso chinoitika. Zvisinei, Carros.com haisi kuita zvekuvandudza zvinhu.
Carros.com haina kuongorora nzvimbo dzose dzakabatanidzwa newebsite yayo uye hazvirevi zvinyorwa zvemasayiti akabatanidzwa. Kubatanidzwa kwehupi hupi hunoenderana hakurevi kuvimbiswa kwaCarros.com kwewebsite. Kushandiswa kwewebsite yakabatana kunowanikwa pangozi yomupenzi.
Carros.com inogona kugadzirisa aya mazwi ekushandira kwewebsite yako panguva ipi zvayo isina chiziviso chekutanga. Nokushandisa iyi webhusaiti, unobvumirana kurarama nekushandurwa kwezvino kwemashoko ekushandira.
8. Mitemo yehurumende
Aya mazwi nemitemo inotungamirirwa nekugadziriswa maererano nemitemo yeConnecticut uye iwe nenzira isinganzwisisi uzviisa kune hutongi hwakakwana hwemareji enyika iyo kana nzvimbo.
Izwi iri rinobudirira saMarch 27, 2019.
Mota dziri kutengeswa padhuze neni
Motokari ne zip code
Nyoresa kumagazini edu emwedzi.
Hota dzese nemarori
Twitter Privacy Policies Mitemo yekushandisa Taura nesu
© 2021 Carros.com. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.